ZVINOKUDZIDZISWA KUNYATSA ZVINHU ZVINOKUDZIDZA PAKUTANGA ROULETTE ONLINE (Chikamu 2 che2) – ProRens
Izvozvo zvingava chikonzero nei zviri kunyanya kusarura kuti tinyatsonzwisisa zvikamu zviduku zvinowanzozivikanwa uye nzira dzave dzakavakwa muedza kugovera roulette nevatengi vanogara. Pasinei nechokwadi chokuti hapana mubvunzo kuti hapana hurumende yakarurama pakutsvaga roulette maroring technique, kuongorora hurongwa hwakarongwa hunogona kuongorora kudengenyeka mukati memakore akawanda. Pasi sezvazvinogona kurira, huripo chaihwo hwave hwakawanda iyo ndiyo nzira iyo mufananidzo wekufambisa kwemafirimu inogara mumutambo wekutengesa inofanira kunge pasina nzira inogona kuonekwa yakafanana neyo inoratidza kuti kuwana mari kune chero munhu anoitamba.
vedu # 1 kukurudzira: casino.com
Izvo zvinotevera zvinosanganisira nzira dzakanakisisa 5 dzakagadziriswa uye dzakaongororwa kuti dzipe iyo yakanakisisa roulette scoring methodology nokukurumidza kuwanika.
Nzira yeMartingale -Iyo inofanira kunge yakanamatira kune kutengesa shandiswa yakashandiswa. Chikonzero chakakosha chegadziriro inobata kukopa mafambiro nguva dzose nguva iyo mutambi arasikirwa. Izvo zvakafananidzwawo nekusvika pakuva nzira yakanakisisa yekushandiswa inoshandiswa pakutsvaga kwakambovapo. Mutemo nehurongwa uyu hauna kuoma. Kutaura zvazviri, iwe unogona kunge wakambofunga pamusoro pehutano pahupfumi hwako asi iwe uchitamba. Nzira yeMartingale ine marudzi matatu zvakananga zvikurukuru Mart Martale, Anti-Martingale uye Gland Martingale. Kuenda nemumwe kubva kune 3 kune mairi maviri ayo anokomborera uye zvinoparadza. Sarudza zvakasiyana-siyana izvo zvichakufananidza nekakurisa roulette scoring chirongwa.
Sangano reLabouchere -Iyewo akatumidza chirongwa chekugadzirisa. Iri sangano rinobatanidza nekushandisa kushandiswa kwakasiyana-siyana kwemigumisiro inobva kuboka remabare rinowedzera zvichienderana nemigumisiro yekusarudza kwegadhi. Uyezve, iyo nzira iyo inokumbira kuti playerter igare yakagadzikana ichengetedze yakanyora index yekuti ari kushingaira sei kutamba purogiramu iri paIndaneti. Nzira yeRabouchere ndiyo iyo nzira inogona kuve inonyengedza kuedza asi kunyanya kushandiswa kweiyo nzira haina kuve nekuvandudza mukati mezvakapambwa.
D’Alembert System -Zvirevo izvi zvakatsanangurwa naJean Le Rond D’Alembert zvakafanana nekufunga kwechimwe chinhu chichiedza kuwanzana chinopa 50 chigumisiro. Iko kufungidzira kwechinhu chinotsvaga kubatana kunonyanya kuratidza chibvumirano nehuwandu hunogutsa hwezvose zvinogoneka. Nyaya iyi neyokutengesa nzira ingave nguva iyo inogona kutora mushure mekusagadzikana kwekutengesa kunopera kukwikwidza kuti kuve nekuenzanisa kwekutora iyo chisingadikanwi chisarudzo painoziva kutsigira roulette scoring methodology.
Purogiramu yeFibonacci -Nzira iyi inonyatsotarisana nepamusoro pekubatanidzwa kwemakambani ekutanga emichina ekuzarura. Iyi nzira inoshandiswa paunhu hune huwandu hwepamusoro pakutsanangurira kunotarisana kana kana nhengo iri kuisa kana kurasa. Nyanzvi yemasvomhu Leonardo Pisano yakagadzira Fibonacci system.
Ndezvipi zvakachengeteka kutaura kuti uri kubatisisa? Kunze kwekuti iwe unoda kubhadharwa mabhadharo akawandisa, ratidza ru roulette scoring methodology iwe iwe unogamuchirwa iwe ucharatidza zvinogumira kwauri pane zvese zvakakwana!
5 ROULETTE MAZANO OKUTAURWA KWEWINNING
Iko hakusi tafura yekufambisa mune imwe kambani yekambani iyo inofananidzira kubwinya kwekutamba zvakanyanyisa kupfuura roulette wheel. Kubva kuCasablanca kusvika kumafirimu aJakob Bond, roulette rouguru yakaguma ichinyanya kugadziriswa pamasikirwo emakwikwi.
Ndezvipi zvimwe zvekukurukura kukuru kwekuti sei – roulette ndeyekukuruka kunofadza kunakidza! Kusiyana ne “even” tempo yemakadhi anoitwa blackjack uye poker, roulette inopa zvose zvinowedzera zvinonakidza kutamba ruzivo: sezvo roulette inotendeuka, mutengesi anodzinga roulette bundu kune imwe nzira, uye nekuda kwekuti inopera kure, hupfumi uye kutarisa zvinokura uye zvinokura!
Panguva imwecheteyo simba re roulette harisi iro chinangwa chekuti nei rakanyanya kufarira kuchinja. Inotarisirawo nzira dzakanakisisa dzekutengesa mazano mumari yakabatanidzwa: yepepuru kana yerima?
Izvo zvataurwa, kushandiswa kwehurongwa wekubereka pa roulette kunogona kukubatsira kupedza mikana yeimba uye kunyatsoendesa kumusha zvimwe zvikomborero mushure mekunge usiku uchitarisa kuti gumbo rinoshamisa rinotendeuka. Pano pane 5 mu roulette tips ye “kubudisa pairi.”
Pakutanga, edza kutsvaga chikwata cheEurope patafura pane imwe yemuAmerica Roulette. Kune Munhu wese, izvi zvinogona kuva zvakakomba kutsvaga kuLas Vegas kana Atlantic Metropolis, chero zvipi zvinyoro kurira meccas seReno, Tahoe, kana kuti zvakasiyana-siyana zvekubhejera majoini zvinogona kupa muEurope roulette wheel. Chii chakasiyana? IEurope roulette wheel ine chete ine imwe isina kuverengwa – zero. Hakuchina chinhu chakadai sekuwedzera “00” nhamba yeguru. Iyi imwe nhamba pamusoro peAmerican roulette wheel inopa imba 2.sixty zvitatu muzana kune iwe, mutambi. Yeuka, mahara anoramba achitsigira imba, saka iwe unogonawo kukohwa purogiramu yega rega yekuvaka mikana yako.
Chechipiri, kutevera purogiramu yebasa roulette uye kutarisa nhamba dzakagamuchirwa pamusoro pemakore gumi akapfuura ndiyo inokosha yekudzinganisa nhamba yako. Zvakanaka pamusoro pematafura ose e roulette, pasinei nepamutambo wekubhejera pamwe chete kana pa-inline, kuratidzira 10 yapfuura kana kuwedzera maitiro pawonesi kana marquee. Iva nechokwadi chekusimudzira nzira yekufambisa munguva dzakapfuura. Pamusana pezvitsvuku zvakasvibirira / nyema zvinowanzoputika mukati memakore-50/50 akacheka (iyo nhamba dzepaguru dzinoita izvi izvi, zvisinei), kana zvikamu gumi zvakapfuura zvinotungamirirwa nemumvuri umwe, kutinhira mumvuri unosarudzira unobereka wager.
Chechitatu, kurega kubva kune imwe nhamba uye sechisarudzo chekugadzirira vatasvi pamapoka eenhamba. Kufamba nhamba dzakasiyana-siyana ndeye misungo uye kunepo yekukohwa pfuma yehavha kadi yakatsva iyo inonyanya kutenda mashura uye inovimba nekutengesa. Kungoisa, mikana yekubudirira inoshamisa kushamisika. Zvakanaka, iwe unogona kukomborerwa, asi munguva refu, iwe ucharasikirwa nemari yemari yako. Kutaura zvakananga, unogona kushandisa usiku hwose kutora mutero kunze kwechose chinotyisa kupfuura pepuru kana rima uye mune chero zvipi zvingafamba nemari. Nzira yakanakisisa ndeyokutarisa twist twese kumubhadharo wega wega: imwe huru yakatsvuka / yakasvibirira, uye neboka duku rekutenderera pane pepu yenhamba.
Chechina, chengetedza mibairo yako patafura ye roulette. Nzira yakachengeteka yekuchengetedza ndeyokutarisa kune zvikamu zviviri zvekutengesa mari yako. Nokudaro, pamusana pekuti iwe unotanga ne $ zana muzviputi uye iwe unoshandiswa zvakafanana ne $ 200, unogona kungofunga kungofamba-famba zvisingatauriki pane izvozvi. Izvo hazvina kukwana kuti vatambi vatsvake zvakakwana kana vakashandisa zvakajeka mari yavo, uye nekuda kwekuita izvi. Tichifunga kuti iwe unosarudza kupa mutori muzvikamu uye kuwedzera zvimwe, chimwe chikonzero chakakura ndechokuita mibairo yako yakadhindwa “chikwata.” Nemhaka yeizvi pawakatanga ne $ zana uye wakawedzera $ 250, isa $ 200 muzviputi muhomwe yako uye kuzviisa kune kungotamba chete nekagara $ 50 muzviputi. Iyi inzira inoshamisa yekutonga kwako kutamba uye mibayiro.
Chechipiri, kana iwe uri kutamba roulette mumutambo, ita kuti zvifungidzike kuti vanobhadhara mari yavo yekubhadhara uye vanoratidza kuti vanoshandisa yakawandisa yemari generator. Zvose pa-line uye mubhuki, roulette mavhiri akagara akasimudza pakati pemhando dzakawanda dzekutamba; zvinenge zvakananga kuti imba ikunyengedzere, uchiona kuti gumbo – kana iri rechokwadi kana rakarurama-ringagona kuyerwa nekudzora. Ona mamwe mazano apa
RURE ROULETTE GAME MUZVINHU-NYIKA
Roulette zvechokwadi ndechimwe chinhu chinonakidza chinonakidza mumusika wepasi. Iwe unogona kuedza kutengesa uku kuburikidza nekunyora kune nzvimbo dzakawanda dzewebhu pane webhu. Saka pane imwe nguva iwe uri kutarisira kutarisana nekushambadzira kusagadziriswa kwekusemesa ruvara rwekutengesa uye kutamba kutamba mumba kune imwe yezvisarudzo zvakanakisisa zvaunogona kushandisa kusati wazvitamba kana mari yakarurama. Izvi zvinowedzera imwe yenzira dzakanakisa dzaungagona kushandisa kushandiswa kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvekutamba. Iwe unogona nguva dzose kuedza kuti uwane nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekuIndaneti dziri kukupa iwe nekusingaperi kwemhando yekuderedza. Roulette zvachose inyanzvi iyo inonyanya kuzivikanwa nekururamisa kwayo. Kuparadzanisa kunopa vatambi vane zvisarudzo zvakasiyana-siyana kuitira kuti vakwikwidzi vanosiyana vanogona kuedza kubva kumarudzi akasiyana-siyana ekutsvaga kutsunga. Zvisarudzo zvataurwa pamusoro apa zvinopa vatambi vane ngozi yakawedzerwa uye kutengesa zvisarudzo zvakafanana nekuti vanobhadharwa pakarepo. Sezvo kudengenyeka kunoshamisa zvakanyanya kushanda saka kune vakasiyana-siyana vemitambo avo vakanyatsoedza uye vanovandudza nzira yavo yakanakisisa iyo inogona kuvakurudzira ivo kuti vaite zvinyorwa zvavo zvakanakisisa munyika yepakombiyuta.
Panguva iyo inotamba uye inonakidza mumagetsi ekudzidzira kuburitsa zvakakosha kuti iwe unzwisise kana pane imwe nzira yakadaro inogona kukubatsira iwe kuti uite purogiramu yako yakanakisisa mukududzira uku. Saka neminiti iwe uri kutarisa pasi rekutsvaga iwe unongoda kuedza kutenderera kune imwe inogona kukupa iwe nemhando yakakodzera ye roulette gumbo kutamba uye kufarira. Iyi ndiyo mamiriro ezvinhu akawandisa zvikuru zvisinei nokuti unoita sei kudengenyeka kushandisa mari chaiye kana mari yenhema. Maminitsi iwe unoda kutamba kuparadzanisa mune yewebhu yepasi iwe unofanidza kuedza kuEuropean assortment seAmerican kusanganiswa kunokupa iwe mukana wakawanda wekuita chikoro chako. IAmerican adaptation inopa vatambi vane zvose zero imwechete uye zero mbiri asi nhengo dzinowanzoda kutarisana neimba yakagadziridzwa sezvinopesana neEuropean shanduro.
Kune maitiro akasiyana-siyana e-roulette nzira dzekushandisa iyo inonyanya kuipa kuti ishandiswe pamagadzirirwo akafanana sezvaanogona kukupa nemakero akaenzana. Mukuwedzera rangarira kuti chikamu che roulette routines kuwedzera kuedza kumhanyirira mushure mekunge waita dambudziko rako. Ichokwadi ndechekuti zvirongwa zvakarongwa zvinoshandisa hurongwa apo vanoenderera mberi vachidzokorora marwadzo enyu kusvikira maita chikwata chenyu chinoshamisa. Iwe unowedzera unofanirwa kuyeuka kuti hen iwe uri kushandisa kushandiswa kweiyo nzira saka iwe unogonawo kuedza kushandiswa kwebhangi kushamisika sezvo sarudzo isingadi kutora pfupa yekubata mabhanki. Saka neminiti iwe uri kusunungura maitiro maviri uye zvinova nechokwadi chokuti iwe unorasikirwa unogona kusvika kune madhora akawanda. Kutamba pa roulette yenyika yakawanda paimba imwe yezvisarudzo zvakanakisisa zvakagadzirira vatambi vakawanda vakasiyana uye vakagadzirira. Panguva iyo iri kutamba mutambo paimba iwe zvirokwazvo haufaniri kunetseka pamusoro pokusunungura chero mari kubva mubhengi rako.
ONLINE ROULETTE NOKUDZIDZA KUTANGA
Ndechipi nhamba yevanhu, munoziva, vasina kumboita roulette chero nguva yavapo? Pasinei nokuti munhu haazoita roulette nokuda kwehupenyu hwake hwose, kune rumwe rutivi ruzhinji rwahwo husingaverengeki kuti munhu chaiye angave asina kana kunze kwekutarisa roulette mumifananidzo inofamba. Roulette ndiyo inokosha pamutsara wekubatana kwemari inowanzozivikanwa nehutachiona hunotenderera. Roulette, ndiyo inonyanya kuraramisa uye inokurudzira kune imwe nheyo yekubhejera pasi pasi, iyo inokonzera bundu rakawandisa mukati mekudya kwayo kuduku kwevhiri uye mafambiro evatambi.
Roulette, mukuwedzera ikozvino uye zvino yaonekwa se rulet, inozivikanwa seye mushure mekuFrance duku nokuda kwe ‘gorosi’. Vatambi vari pane izvi zvinonakidza vanogona kusarudza kuti vashandise pane imwechete kana kuti kuchinja kwenhamba; mivara yakaita rima kana kuti yepepuru, kana yakajeka uye kunyange nhamba. Nhamba yakakosha kana ruvara yakafa yakagadzirirwa ne croupier kutenderera gumbo uye bhora mumagetsi ekutakura mumwe kune mumwe. Bhora uye uye inowira pamubhiri ndokupinda mune rimwe remasuo, richiona zvichifunga kuti mumwe anorasikirwa kana kugoverwa.
Roulette inoratidzwa nehuwandu hwaro hwekufambisa tafura. Izvi zvinogadzirisa zvikwereti zvinokurumidza kusanganiswa bhegi yekutengesa dzimwe nzira.
Roulette ine zvikamu zviviri zvechokwadi-gumbo, uye tafura. Kufambira mberi kwenhamba kunorongwa kumativi ose ari kunze kwegumbo. Hazvina kunaka uye kunyange nhamba dzinozivikanwa nemirairi yepepuru uye yerima mumwe nomumwe. Bhora rinodonha, rinoputika, uye, rinopoteredza gumbo sezvarinoshanduka. Bhora rinotora tsvina panzvimbo yakasimba pane imwe nhamba nekuda kwekuti tafura yacho inosanganisira zororo. Vatambi vanoona kuti bhora richarega kuenderera mberi zvakadini.
Vatambi vanofanira kuvandudza kuonekwa kwavo nenzira yakarurama nokukurumidza kupfuura kuzviwana muhondo yechokwadi. Vangangodaro vanoziva mirayiridzo uye nzira dzekutengesa vasati vatonga dhora rakanaka. Nenzira iyi nzvimbo ye roulette inline inogadzirwa. Iwe uchaita kuti iwe pachako uzvitsakatise nguva yakawanda muine roulette isingawaniki. Iwe unonyatsoratidza mutsa wemashoko okuti ‘Roulette’ uye hit hit tsvaka. Iwe uchazowedzera mukuwedzera kwekuratidzira kwekrini yako yakavharwa nekawandisa rezvinyorwa zvemashure zvinokubvumira kuti utambe roulette.
Enda kune imwe nzira inofadza kuti uongorore mirayiridzo, kuti hurongwa hunoita sei, uye chii chinogona kuva roulette; izvi zvinokukurudzira kuti uzive zvachose zvaunotarisira, iwe paunotanga kutanga. Tanga kugadzirisa urongwa hwako roulette pane imwe iyo inosunungurwa kubva pamhosva, usati watanga kutamba nayo mari. Zvichienderana nokuti mune chero kuonga kunogoneka, edza kuita chirongwa chekambani yakadaro, iyo ichakubvumira iwe kutenderera gumbo, pasina iwe unoda kuisa danda.
Edza kutamba neklubhouse iyo ine yeEurope inotengesa roulette, sezvo gumbo iri rine zero roga roga; izvi zvinotungamirira nhamba kumhanya kune tarisiro yakajeka yekubudirira, kupfuura neAmerican inline roulette, iyo ine zvikamu zviviri yakaisanganisira. Kunyanya kuisa pangozi pamwero wekunze, semusingafungi kana kunyange, rima rakatsvuka kana rima nezvakadaro. Tinovimba, idzi nharo kuti tive nekambani yakagadzirwa nemushute inogona kunge yakabatsira, uye iwe ungaita kuti kuenda kunogara kubudirira.
NZIRA YOKUDZIDZA GORIYO YOKUTANGA PAIYO
Iro roulette diversion inguva yakawanda inofadza seyokupedzisira kupfuura yakange iri munguva yakapfuura. Nyanzvi dzakagadzirisa matanho ayo vatambi vanowana purofisi yakaenzana iri kutamba mumambure. Chero munhu upi zvake anokwanisa kuwana zvinyorwa zvinoshandiswa paIndaneti zvine tarisiro yekuti vane sangano renyika iri paIndaneti. Izvi zvinowedzera kuti vatambi havadi kubhururuka kure ne Vegas kuti vaite chimwe chinhu. Chokwadi chinotaurirwa, zvakasikwa zvinopiwa paIndaneti zvinokwana kuchisarudzira.
Mumakore mashanu apfuura, pane vanhu vakawanda varipo vari mumitambo yevashandisi vachinyora paIndaneti, kunyanya iyo inopa roulette maitiro. Pano pane mavara maviri e roulette diversion, Europe neAmerica. Roulette yeEurope inofananidzwa zvakanyanya nemafomu eAmerica, kunze kwekuti, 0 uye 00 inonzwisiswa pairi gumbo iri muAmerican form; apo fomu yeEurope inobata chete yega 0.
Saka munhu angagona here kuwana nzvimbo chaiye uye yakanaka kuti atambe iyi inofadza paIndaneti? Mhinduro yacho yakananga – hongu! Izvo hazvo kushanda nesimba kuti uwane roulette chivaraidzo paIndaneti. Iko kunosanganisira kuisa maGoogle kuGoogle.com uye kushanda kutsvaga kwezwi rokuti ‘online roulette amusements’. Tsvakurudzo yekutsvaga yepaIndaneti inopa zvose zvinyorwa zvemasayiti akanaka. Aya mahara anowanzopa mubairo wekugamuchira iyo inogona kunge yakaenzana ne100% yechitoro chekutanga mushure mekubatana, kupa mutevedzeri zviyero zviviri zvemari sezvaanotanga kutamba.
Nei Uchigadzirira Roulette?
Kukurukurirana kwakakosha kwechikonzero nei roulette chinhu chinofadza zvikuru chinokonzerwa nemigwagwa yakasiyana-siyana iyo vatambi vanogona kuisa mavhiri. Mumwe anogona kugadzirira pamusana pekuungana kwema nhamba kana kuti nhamba imwe chete. Uyezve, mutambi anogonawo kusarudza kuvhara pane nhamba dzisinganzwisisiki, kunyange nhamba, uye mumvuri rima kana kuti tsvuku, uye nezvera.
Kune zvipo zvakasiyana-siyana, mibairo, uye yakafanana inofambidzana nekutamba roulette diversion online. Mutambi wacho zvakare ane chisarudzo chekutamba pasina kana kuti kwete nokuda kwechikonzero chaicho nechinangwa chaanogona kudzidza nacho kufara asati asanganisira mari. Kana mumwe munhu ari nyorofa iyo inofanirwa kushanda kuti iende kana kuti muchengeti ane unyanzvi uyo anoda kutamba asina mari, iyi ndiyo nzvimbo yakanakisisa kuva. Kunze kwekuti munhu ari kutamba roulette kwenguva yakareba uye anonzwa kudiwa kwekuongorora imwe nzira yega pasina chikonzero chaicho saka iyi ndiyo nzira inoshamisa yekuita kudaro.
Achifunga kuti munhu ane rudo roulette pfuma kana achingova nechido chekuedza, zvino ndiyo nzira yakanakisisa yekuita nayo ndeyokufunga nezvekubatana ne-electronic money joint. Mumwe anogona kuwana zvipo zvakanyanyisa pasina pikiniki kuti arwise apo iye anogona kuwedzera zvivimbo uye kuonga kufara. Zvinonyanya kukosha kuti munhu ave nemari yakakwana yokutamba uyewo nzira yakanakisisa yekutamba. Mumwe anogona kunge akasimudza kutamba apo mumwe ari pane zvidzidzo. Kunze kwekusava nechokwadi, vatambi vangasatombosangana nengozi nemari yakawanda kudarika zvavanokwanisa kurasikirwa uye vanogonawo kuedza kuva nenguva yakawanda vachitamba pamashandi emari pamitauro kunze kwekuvatorawo pasina pasina mubvunzo. Mukuwedzera, zvakanakisisa kutsvakurudza zvakanaka pamusoro pekutsvaga kwekutsvaga yepaIndaneti vasati vauya navo. Pane matanho ematambudziko anowanzoitika mumazuva ano emazuva ano.
Dzokera Chikamu 1
Chimwe chinoshamisa pamusana roulette chinokunda:
Previous Post« Previous د وینډوزونو د لیږد لپاره ستراتیژی کله چې د رولټ آنلاین کول (2 برخه برخه)
Next Post ரவுல்ட் ஆன்லைனில் விளையாடும் போது வெற்றிகள் வளர்க்கும் மூலங்கள் (2 இன் 2 ஆம் பாகம்)Next »